Indlu yokubaleka yendalo kufuphi nolwandle & neKärdla
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguKermo
Indlu yeholide epholileyo ejikelezwe yimithi yejunipha, umgama wokuhamba ukuya elunxwemeni, izibuko, indawo yokutyela yaseRoograhu kunye nesikhululo seenqwelomoya. Yiza nebhayisekile, isikhephe, imoto okanye inqwelomoya (imizuzu engama-20 yokubhabha ukusuka eTallinn), nokuba uhambe ngeenyawo. Zonke iindlela zikusa kwindlu yeeholide yaseMeresassi!
Indlu ikufuphi nesikhululo seenqwelomoya saseKärdla, malunga nemizuzu eli-15 yokuhamba umgama. Unxweme lusondele ngakumbi.
Iinqwelomoya ezivela eTallinn ziza yonke imihla, kodwa isikhululo seenqwelomoya asixakekanga kwaphela ( 1-2 iinqwelomoya ngosuku) Ngaphandle kokuba loo ndlu ingqongwe yindalo, sinendawo yokutyela entle kwimizuzu eli-15 yokuhamba. Indawo yokutyela ibonelela ngeepizza ezilungileyo kunye nemenyu ye-la carte, ibizwa ngokuba yiRoograhu.
Abamelwane bathambile kwaye bahle, ziigusha. I-Kärdla ifikeleleka ngebhayisikili, i-5 km ukuya kwinkunzi ye-Hiiumaa. Kufuphi nendlu sinelitye leliso likaHiissaare ( Hiiessaare silmakivi), olona sekelo bude buzimitha ezingama-32,4.
Ngexesha lasehlotyeni, sinomzila wegalufa wedisc kufutshane. Ngexesha lasebusika umzila ujika ube ngumkhondo we-ski okhanyayo wokutyibiliza kwidolophu. Zombini zikwi-2,7km ukusuka kwindlu.
Umbuki zindwendwe ngu- Kermo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hiiessaare